Subject: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 5:25 pm
1001burmese.blogspot.com မှာ ရေးသားထားတဲ့ post တွေကြောင့် တစ်ချို့ တွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။ လူဆိုတာတော့ ကိုအားနည်းချက်ကိုထိရင် နာတတ်၊ ကြောက်တတ်တာပဲ။ ဥပမာ - ဘူးတဲ့လူကို ဘူးတယ်။ ခိုးတဲ့သူကိုခိုးတယ်လို ပြောရင် ဘူးသည့်၊ ခိုးသည့်တိုင်အောင် ဘူးဘူး၊ ခိုးဘူး ဆိုပြီးငြင်းမှာ။ သက်သေ နဲ့ဘာနဲ့ ဆို ငြင်းမရရင် ရှက်တတ်တယ်။ ကြောက်တယ်။ ရမ်းမယ်။ ဖြစ်တတ်တာတွေပါ။
ကျွန်တော် ဝေဖန်ပါမယ်။ ဝေဖန်တယ် critic တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကျွန်တော်ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများက ဝေဖန်တာကိုမခံနိုင်ဘူး။ သူတို
့ပြောတယ် ဝေဖန်ပါ၊ သုံးသပ်ပါ။ ခင်ဗျား သွားဝေဖန်၊ သွားသုံးသပ်လေ၊ မကောင်းတဲ့အကြောင်းကို သွားသုံးသပ်ကြည့် ရှေ့တင်သာ ဟုတ်ကဲ့
ခုလိုထောက်ပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာရယ်နဲ့ ။ နောက်မှာတော့ ဒင်းက ငါ့ကို မနာလိုတာ၊ မရှုဆိမ့်တာဆိုပြီး...။ ဒါဟာ ခင်ဗျား ကံကောင်းလို့ ၊
ဒေါသကြီးတဲ့သူ၊ လူကြီးလူကောင်း မဆန်တဲ့သူ၊ လူမှုရေးနာမလည်တဲ့ကောင် ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားနာပြီပဲ။
ကျွန်တော် ဝေဖန်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဝေဖန်ပါရစေလို့ မပြောထားပါဘူး။ ဘယ်သူစီကမှာ ခွင့်တောင်းမှာမဟုတ်လို့ ပါ။
ဖန်တီးတဲ့သူမှာလည်း သူ creativity နဲ့ innovative ဥာဏ်အပြည့်အ၀ရှိတယ်။ဝေဖန်တဲ့သူ မှာလည်း သူဟာနဲ့ သူ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိတယ်။အ
သူဘယ်လို ဖန်တီးတယ်။ ကူးချတာလား။ မတတ်တခေါက် တတ်တစ်ခေါက်လား။ ဘာလားပေါ့။
သူဝေဖန်တယ် ဆိုတာ၊ သေချာ အချက်ကျရဲ့လား။ မသိတသိလား။ ရမ်းတုတ်တာလား။ ဘလာ ဘလာ ပေါ့။
အဲတော့ ဘယ်လိုပဲ ဖန်တီးဖန်တီး၊ ဝေဖန်ဝေဖန် ပါ၊ ဘယ်သူမှာ အမှားမရှိပါဘူး။ 1001burmese ကဝေဖန်တယ်၊ သူပုံစံနဲ့ သူ။ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း ဝေဖန်တာကို ဝေဖန်တာလို့ ပဲမှတ်ပေါ့။ စာအရေးအသားကောင်းတယ်၊ ဟာသမြှောက်တယ်။ ရိုင်းတာတွေး/တွေ့ရင် ရိုင်းတယ်ပေါ့။ ရီစရာဆို ရီတာပဲ။
ကျွန်တော် ဘယ်သူဘက်လိုက်ပြောလဲ။ ဘယ်သူဘက်မှ မပြောဘူး။ ကျွန်တော် နှိမ်ချပြောလိုက်လို့ လဲ နှိမ်ချခံရတဲ့ကောင် နေစရာမရှိ၊ စားစရာမရှိ
မဖြစ်သွားဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမှမဟုတ်တာ။ မြှောက်ပြောပေးလိုလဲ ကျွန်တော်ဘာမှမရဘူး။
Last edited by Admin on Fri Jun 20, 2008 8:04 pm; edited2times in total
Subject: Re: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 5:26 pm
niknayman.blogspot.com က အရင်တုန်းက Myanmar News တွေသီးသန့် ရေးပါတယ်။ အခု သူလည်း သည်းမခံနိုင်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါသအလျောက် Personal Feelings တွေပါလာပါတယ်။ ဒါသူ Personal Blog ပါ။ သူရေးချင်တာ ရေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဝေဖန်ချင်တဲ့သူလည်း စိတ်ထင်တိုင်းဝေဖန်လို့ ရပါတယ်။
myhome16.blogspot.com/ ကသူဝါသနာပါတာသူရေးပါတယ်။ အရေးအသား ကောင်းတယ်။ အတွေးအခေါ်ကောင်းတယ်။ သူကိုလည်း ဝေဖန်ထားတာ ဟာသမြှောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်ပြီးရီလိုက်တာ။ Tea (Owner Of myhome16) ကိုရေးလို့ မဟုတ်၊ ရီရလို ရီတာ။
ဒါပေမယ့် Blogတွေလိုက်ဖက်ရင်း သဘောမတွေ့ တာ နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက နိုင်းနိုင်းစနေ Blog ပေါ်က Comments တွေ။
ကိုစိုးထက်နဲ့ မစိုး...သက်လွင် ကို ကျွန်တော်နည်းနည်းမှ မသိ။ သူတို့ ကိုသက်ချင်နေတဲ့သူ Annonymous တွေကိုလည်းမသိ။ ကိုခံခဲ့ရလို့ 
လက်စားချေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆန္ဒပဲ။ ခုတာက နအဖ သားသမီး မို့ လို့ တဲ့။ ပေါက်ကရအတွေးအခေါ်။ ကျွန်တော် အဲလိုတွေးနေတဲ့ကောင်မျိုးကို။
ကိုစိုးထက် သူဟာသူနေနေ။ ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူး။ တပ်မတော် သာအမိ၊တပ်မတော်သာ အဖ ပြောပြော။သူဟာသူပြော။ သူဘက်သူနေ ကိုဘက်ကိုနေ။ထားပါတော့ ကိုစိုးထက်က မင်းတို့ ကို စစ်အစိုးရက ကျွေးထားတာလို့ တရားလက်လွတ်ပြောရင်တော့ လုပ်လိုက်ကြပါ
ကြိုက်သလို။ ကိုယ်လိုချင်တာ ဦးသန်းရွှေကြီးသေဖို့ လည်းမဟုတ်ဘူး။( မုန်းဖို့ကောင်းတာတော့ ဟုတ်တယ် (:ဒေါသ )
လွတ်လပ်တာတွေ၊ မလွတ်လပ်တာ တွေထား။ ဒီမိုကရေစီလည်း နား။ အဓိက ကပြည်သူတိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှိ၊ လုပ်သလောက်စားနိုင်သောက်နိုင်ြ့ပီး
မစိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင်ကိုလည်း ဒီလိုပဲ။သူတို့ ကြားက ပြသနာကို ကျွန်တော်အသေးစိတ် မသိပါ။ သူမကို ပြောထားတာတော့ ရစရာမရှိ။
ကျန်တာမပြောဘူး။သံရုံးက၀န်ထမ်းက သူမ ကို ထမင်းပဲကျွေးကျွေး၊ ကျွန်ပဲခံခံပါ။ ဦးနေ၀င်းနဲ့သူမိန်းမက သူမကို သူတို့ ကြိုက်သလို မ ပါစေ။ ၄င်းတို့ ကဘာကိုမကျေနပ်ပါသနည်း။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ထဲက အတွေးတစ်ခုရှိတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူ စားနိုင်သောက်နိုင်တာက သူကုသိုလ်ကံပါလို့ ပဲစိတ်ထဲထင်တယ်။ သူဘယ်လို မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ရရ။ အဆုံးစုံ သူလုယက်လာတာနဲ့ စားနေရင်တောင် သူစားနိုင်လို့ စားတာပဲ။ မိဘပိုက်ဆံရှိလို မိုက်မယ်။ သုံးမယ်။ ဖြုန်းမယ်။ လုပ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်က တော့ မိဘပစ္စည်းက ကျွန်တော်ပစ္စည်းလို့ မမှတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တော့ ဒီအသက်၊ ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီလောက်မရှာနိုင်ပဲ မိဘပိုက်ဆံနဲ
့ဒီလောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကြွားရမှာ ရှက်တယ်။ ကြွားတဲ့လူကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူး။ သူခံယူချက်နဲ့ သူပဲ။ ပျော်ပါစေ။ သူကုသိုလ်ကံနဲ့ သူ။
ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အယုံအကြည့်မရှိတောင် ရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်။ခင်ဗျား နဲ့ ကျွန်တော်၊ သူ နဲ့ ငါ နာမည်ကစပြီး နာမ်စားတောင် မတူ၊
ဘာမှကိုမတူဘူး။ လိုက်နှိုင်းမနေနဲ့ ။
Last edited by Admin on Fri Jun 20, 2008 6:04 pm; edited4times in total
Subject: Re: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 5:27 pm
နောက်တစ်ခုကတော့ အဝေဖန်မခံနိုင်တဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာများပါ။ ဟိုစင်ပေါ်မှာ စကားတက်ပြော (မိန့်ခွန်းပေါ့) တုန်းက အသံကတုန်၊ မျက်ရည်ကရွဲနဲ့ စင်အောက်ရောက်တော့ အဟိဟီနဲ့။ အံ့ပါ့ မင်းတို့တွေ ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ပါလား။ ထားပါ။ ပြောချင်တာဝေဖန်တဲ့ အကြောင်းပါ။
Singapore မှာပါ။ Operation Nargis တဲ့။ နာမည်ကတော့စားတယ်။
ရောင်စုံ Highlighted Rich Text,Crazy Background Rainbow colorနဲ့Formal လိုပြောတဲ့ E-mail တစ်ခုပါ။ရေးပြပါ့မယ်။ Note Pad မှာရေးတော့သူ့ လို Rich Text html တော့မရှိဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့ ရှင်းပြပါမယ်။
First Email ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Times New Roman , Font 18 နဲ
့ရေးထားတာပါ။ အချိန်၊ နေရာ ဘာညာ။ Logic ရှိတယ်။ လိုရင်းရောက်တယ်။
အဲ.. Html Rich Text နဲ့ လာသေးတယ်။ Sender တော့ မတူပါဘူး။
style="background-color: rgb(0, 204, 204);"
font = “Time News Roman ,size (12)
Dear all ကိုမာ
This email is the confirmation for (Tomorrow font size အနည်းငယ်ကြီးသွားသည်၊ Red Cross အနီရောင်) meeting (နဂို Font), 16 may 2008, The Friday (font size ကြီး၊ ကြက်သွေးနီရောင်ဖြင့်)
(Meeting will start at 7:30pm Sharp စာလုံးကြီးကြီး အပြာရင့်ရောင်ဖြင့် Italic စာလုံးများယိုင်နေ), as ambassadors and school principlese are invited.
Please do make effort to come early, take account the time for (ဆီမီးကိုလံ itallic ဖြင့် what if you get lost in the school campus ဆီမီးကိုလံ) နောက်တစ်ကြောင်း
Yeah, the meeting will be held in (NUS campus, LT-18(lecture theatre 18 ) စာလုံးတော်တော်ကြီးကြီး အပြာရင့်ရောင်၊ စာလုံးများမယိုင် သို့ သော် Underline မျဉ်း အပြာတားထားသည်), which is located in Business school.
ဟဲဟဲ How to get there (Question mark)
(စာလုံးအကြီးစားကြီးဖြင့် Take BUS "96" from clecmenti interchange or "95" from Buona Vista MRT. ကို ကြက်သွေးရောင်ရှိ စာလုံး စောင်းစောင်းများ) (ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဘာလို့ အဲလောက်တောင် စာလုံးတွေက ကြီးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်တာလဲဟင်)
Please download the two maps to guide you.
For those who will be taking bus "96" space space coma space place to get off will be dot dot dot dot dot dot..start counting the bus stops after the bus has turned into NUS campus from Clementi road fullstop (A left turn after highway flyover) fullstop Get off at the 3rd bus stop which is at opposite side of the Library.Then use the map and walk.
For hose who will be taking bus "95" stop at the Kent Ridge Terminal. How will you know (Question Mark) Don't worry (ဟာဟား) bus driver will chase you out (သေသွားမယ်), as it is the interchange. Use the map and walk.
For those who forget to print out the map, there isamap at every bus stop. (oh great)
Remember to come early as NUS may look likeajungle ( မှတ်ထား) to you and you might get lost. (ကြားသလား)
(Don't be scared) One Tips for you, traffic is alwasy heavy during 6:30 to 7:30 at (C အသေးဖြစ်တွားဘီ)clementi area. Buona Vista can beasmart choice as well. (ဟဲဟဲ Secret တွေ)
One request, please distribute this mail among your circles of friends and pass the message around that (everyone is invited ကိုအလားတူ စာလုံးအကြီးစား ကြက်သွေးရောင် စာလုံးယိုင်ယိုင်များ). ( hmm forward မလုပ်ရဲဘူး၊ လုပ်လိုက်ပါမယ် သူရေးတာပဲ)
One reminder ( again,ဟုတ်ကဲ့ ) , fill your stomach before you come down as there won't be any refreshment. ( အင်း၊ ဟုတ်ကဲ့) . All food are reserved for the people in Myanmar. ( ကောင်းပါ့၊ ဟုတ်ပါစေ)
One warning (ဟာ များဘီ), you can not eat inside the LT. Please don't make the organizers looks bad. ( ဟုတ်ကဲ့အကို၊ နင်ဟိုကျရင် ငါမစားဘဲ မစားနဲ့ ငါမျက်နှာပျက်မယ်၊ သခ္ခင်္ါကျတယ်။ အမေပြောတာပါ၊ ဟုတ်ကဲ့ အမေ).
Please bear this mind, "We are united and we are disciplined." (ဟုတ်ကဲ့ပါခင်..ဗျာ. သားသဘောပေါက်ပါဘီ။)
All White & Gray Texts are actual texts in e-mail. But the formal original invitation mail is much prettier and more beautiful with diffrent size of font design and colorful.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တစ်ကယ်လည်းသည်အတိုင်းဖတ်ပြဖူးသည်။ ပျော်စေ၊ပျက်စေ ပြန်ဖတ်ပြတာပါ။ Original Mail ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ကျွန်တော် Invitation letter များပို့ ခွင့်ရခဲ့ရင် လေ့လာလို့ ရအောင်ပါ။
သည်စာကို သည်လို လေးပြန်လိုက်တဲ့သူရှိသည်။
Last edited by Admin on Fri Jun 20, 2008 8:33 pm; edited3times in total
Reply Above E-mail
I think this email could have been
written in more professional mail instead of highlighted message
sounding like " nagging from parents". Since he wants us to forward it
to anyone who wants to volunteer, that anyone can be someone
non-burmese , or someone older withalot of experience in charity
This highlighted part of email pisses off some people. Smile The
project organizer should look into someone with PR ( Public Relation)
A Concern Burmese
သူရေးထားတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဝေဖန်တဲ့သဘောကိုတောင် မရောက်ပါဘူး
Reply Above E-mail from sender
It was written in more friendly manner rather than an official invitation letter.
We are creatingawarm and friendly environment for the new
volunteers to join in as well as making comfortable for the current
I will buy your comment on "what if the mail is to forward to
someone older withalot of experience in charity issue." It is kinda
However, I do not understand why some people might get pissed off
by hilighted words in the email. They just don't like the color or they
are just negative minded??
Anyway, thanks for your comment and we will try our best to accomdate you all.
ကြည့်ပါ။ ထားပါဦး။ သူလက်ခံလိုက်၏။ သို့ သော်သင် ၄င်းအား Comments ပေးရန်တွန့် သွားသည်။
After meeting: Review it by following E-mail
1st of all what I meant by highlighted was the whole blue part, 2nd
part of letter, not to the highlighted words. My bad that I didn't
state it clearer.
2nd point. I was at the briefing. There are couple of points that I would like to point out.
What is the objective of the whole briefing?
* to let the Foreign Diplomats know about aftermath of cyclone condition?
* to recruit the volunteer?
* to raise the funds?
There arealot of redundancy in power
point slides. If you want to show the Organization plan of "Operation
Nargis", why SMU charity's Organization was flashed ? What do you want
your audience to see? "Operation Nagis" or "SMU"?
Why did this director of "Operation Nargis" said in front of
Diplomats that " we want Nargis to be back to headlines because China's
earthquake is now popular"? This is totally unprofessional!!! You can't
choose what or when to print in news headlines. This is Natural
Disaster!!! Neither we can prevent it nor make it. Press will write any
news from any part of the world. We, Burmese, don't own SPH. The only
way we can approach is by Lobbying with SPH and getting Media's
Seriously, I do think "Operation Nargis" should get some
professionals to get help with Press issue, Public Relation and
Marketing ASAP. If I were to attend more briefings similar to today
evening, there is less chance of getting public's concern, sympathy and
might even degrade the credibility of "Operation Nargis".
There arealot of experienced Burmese out there who have
connection with United Nation, Singapore Press Holdings and MediaCorp.
All you have to do is just "seek". They are willing to help.
I am just expressing this long email because I am also another Burmese who caresalot about Burma as much as you all. Smile
A Concerned and Disappointed Burmese
Reply E-mail From Sender
Name oradisappointed burmese,
As I have mentioned, we are trying our best to make this happen.
The objectives of the whole briefing are confidential to our ECs only.
SMU and operation Nargis?? Hmmm.... seems like you were not paying
attention. There were NUS and SIM as well. We all are working in
parallel due to our own principles and regulations. However, we are
working towards the same goal and we are agreed to work together in
Anyway, you sounds likeavery negative person.
This is what i used to tell to people.
If you can't bealeader, beagood follower. Someone is leading you towards the right way, please beagood supporter.
Being negative can have lots of effects on your ownself.
Please look things in positive way, and give only your
suggestions. Don't criticize the one who is trying his / her best. Only
proper guidance and suggestions will help him / her to do the job in a
better way. Don't just simply ask him to stop and tell him that he is
useless. You have to learnalot in your life. Please listen to the
We are trying to help our own people, and you are criticizing us. But what have you done for your country and for the people?
So suggestion only please. We have been taking too much
responsibilities and at this point of time, the last thing we need is
"You are useless, ask someone else to do." So no negative comments
Last edited by Admin on Fri Jun 20, 2008 8:55 pm; edited4times in total
Subject: Re: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 6:01 pm
မြန်မာပြည်အတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့သူကို အပြစ်မတင်စရာ မရှိပါဘူး။ အမှားရှိရင်တော့ ပြောမှာပါ။
Ambassadors တွေနဲ့school principles တွေ လာမှာမို့ လို့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပါလို့ သတိပေးတာ လက်ခံလို့ ရတယ်။ ကျွန်တော်နောက်တာ နောက်မယ်။ ပွဲတစ်ခုရဲ့ စည်းကမ်းကိုတော့ လိုက်နာတယ်။ ကိုယ်ကြောင့်ဆိုတာမျိုးကို အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ အဲလို Foregin Diplomats Ambassadors တွေနဲ့school principles တွေလူတွေ ပါတဲ့ Audience ရှေ့မှာ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲလက်ထဲ အထဲက ကားသော့လား၊ ဘာသော့လားကို Jingling လုပ်နေတာကတော့ ပွဲထဲက လူတွေထင်မဟုတ်ဘူး၊ ပွဲမသွားတဲ့ Burmese တွေကို Look bad မဟုတ်ဘူး။ Look down မှာပါ။
China Earthquake ကို သတင်းစာမှာ Headline ဖြစ်တာကို i want this , i want that ဆိုတတ် မတက်တခေါက် proficiency နဲ့ ဘာပြောစရာရှိလဲ။
ခင်ဗျားတို့ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းတာနားလည်ပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စတွေက ဒီလိုပါပဲ။ နောက်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ အဲဒီတုန်းက 16 may 2008 အကြောင်းကို highligh လုပ်ပြတာ။Critic ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ ကိုမျိုးချစ်၊မမျိုးချစ်များကိုသိစေချင်တာလည်းပါပါတယ်။ ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်စီလာတဲ့ Comments လေးတောင် လက်မခံနိုင်ရင် အမှားကိုဘာကိုကြည့်ပြီးပြင်မှာလဲ။ ဝေဖန်တဲ့လူရှိမှ ကိုယ်ဘက်ကချို့ ယွင်းနေရင် ပြင်လို့ ရမှာပါ။ လူပေါင်း တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လောက် Comments ပေးတာဟာ ကျန်တဲ့ ၉၉ယောက်လုံးကကျေနပ်တယ်များမှတ်သလားကွယ်။ Comments ပေးတဲ့ တစ်ရာထဲက တစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဦး။
ဘာပဲပြောပြော လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်Own Target ကိုယ့် Own Timing ရှိပါတယ်။ အပြစ်တွေရင် မျက်စိမှိတ်ထားတဲ့သူ ရှိမယ်။ လိုက်ကြည့်ပြီး ပြောနေတဲ့သူရှိချင်ရှိမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Open One Eye, Close One Eye , ဖွင့်သင့်ရင်ဖွင့်ပြီး၊ မှိတ်သင့်ရင်မှိတ်ထားလိုက်ပါ။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးသည် ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ ဖျက်ထားခြင်းများ မရှိသော အမှန်စင်စစ် များဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် စာအရေးအသား ချို့ ယွင်းမှုကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာ/ယောက် ထိခိုက်မှုရှိခဲ့က တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Last edited by Admin on Sun Jun 22, 2008 4:27 pm; edited2times in total
Subject: Re: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 8:02 pm
Subject: Re: Operation Blogis Fri Jun 20, 2008 8:18 pm
hmm ..thanks for sharing .. Admin !
Subject: Re: Operation Blogis Sun Jun 22, 2008 2:48 am
Wow...agreat job admin..... i am really support to u.... what u did in this topic... That reviewed email conversation pointed that we,alot of burmese, have to learnalot of professional, and good communication skills. peace
Subject: Re: Operation Blogis Mon Jun 23, 2008 5:03 am
Just wanna say Be more skillful even if you were cleaner or whatever , Be more professional & skillful if you arealeader of organization orapart of organization.
Subject: Re: Operation Blogis Mon Jun 23, 2008 12:16 pm
ကြုံတိုင်းရွှာမှာတော့ အဲလိုရှိဘူး။ သူချီး ဦးဖိုးစည်က သိပ်တော်
Subject: Re: Operation Blogis